5.5 HP Johnson 1960 Model CD-17 nataon'i Bosse "Bo" Petersson - Stockholm, Suède | Fanamboarana môtô sambo ivelany
5.5 HP Johnson 1960 Model CD-17 nataon'i Bosse "Bo" Petersson - Stockholm, Suède
napetraky ttravis on Masoandro, 10 / 28 / 2018 - 21: 14
Bo dia naman'ity tranonkala ity hatramin'ny nanombohako sy ny aingam-panahy ho ahy mba hitazona ity tranonkala ity manohy ny taona 13 lasa.
Voazara Outboard-Boat-Motor-Repair Facebook Page November 1, 2009.
Tiako ny hanome anao ny fisaorako sy ny fisaorana maro nataonao
tranonkala, ary ny lahatsoratra momba ny Tune-Up.
Efa nampiasa azy ireo be dia be aho, ary teo foana izy ireo mba hamaha ny olana
Fanontaniana momba ny fanamboarana amboara voalohany nataoko.
Mech. Mpampianatra avy amin'ny asa, niasa tamin'ny taona 38 aho tamin'ny fampidirana solika
fitaovana (Bosch) any Soeda, izany hoe fivarotana teknika sy fampiharana amin'ny gazy
ary motera diesel.
Na eo amin'ny lafiny ara-tsaina sy ara-pihetseham-po, na izany aza, hatramin'izao, dia saika ny saiko
Niara-niasa tamin'ny motera sy ny entona 4.
Ny famoahana farany dia namboarina ho an'ny 4-6 hp ivelan'ny sambo ho an'ny 14 'sambo.
Nahazo valiny iray izahay, nividy Johnson Seahorse 5.5hp tao amin'ny nosy misy anay
Ranomasina Baltika ivelan'i Stockholm, Soeda. Afaka nivadika ny motera ka nanontaniako
ilay lehilahy raha nihazakazaka izy. "Eny, roa taona lasa izay", hoy izy namaly, ka nividy izany izahay
ho an'ny 55 $.
Ny Johnson kely dia CD17 (1960) miaraka amin'ny laharana serial B 9716, izay
natao tamin'ny orinasa Johnson ao Belzika ho an'ny tsena Eoropeana.
Ny Tune-Up dia lasa fanamby tena izy, indraindray ankoatra ny mahazatra.
Tao an-trano dia hitanay ny rano 80 tao anaty tanky, ny lohan-danjam-bary "nohavaozina"
karazana silikôla, marika amin'ny hafanana (loko tsy hita) noho ny tranokely
Thermostat. Noho izany, akaiky ny fasana ny motera. Ny plugs,
Na izany aza, dia vao haingana sy nanana endrika tsara, dia nanapa-kevitra ny hanandrana ny "Misiôna aho
Ny zavatra voalohany, ilay loha, tamin'ny bakteria nidona, dia niorina tamin'ny kely
ny alim-bary, ary ny kiraro miloko matevina eo akaiky eo amin'ny volo dia nampidirina tamin'ny "LocTite maharitra". Fanamafisana ny plastika glasy feno plastika
(Fandefasana plastika) dia vita ilay fandidiana.
Maka ny efamira ivelany, enina (amin'ny folo) bolina ary iray (amin'ny fito)
Ny kavina tao amin'ny fizaran'ny lohan-kery sy ny faritra ambany no tapaka. Na amin'ny
Ny famarotam-pitandremana tsara ireo kofehy ireo dia tsy azony natao hamonjena azy ireo
kalitao. Ny olana dia navotsotra tamin'ny famoahana ireo bozaka 8,5mm, ary ny famenoana azy ireo
miaraka amin'ny bitsin'ny M10. Ny fametrahana tsora-pamokarana M10 miaraka amin'ny ¼ "kofehy UNC
nampidirina, nifototra tamin'ny "LocTite maharitra".
Samy nipaoka ireo kofehy roa ireo, ary nasiany fohy fohy, tapa-tavoara solika,
Araka ny filazàna, nailika ny rambony. Satria mafy be ny trano rihana
Nentina sy navitrika ity faritra ity, navosaina, nofenoina, ary nanangana ampahany
miaraka amin'ny fibre glass feno Plastika plastika
Na dia ratsy kokoa aza, ny fanjaitra haingam-pandeha haingam-pandeha ary ny kofehy mifanaraka aminy
dia potika ny gorodona. Nanamboatra fanjaitra vaovao aho teo amin'ny latabatro, ary a
Fanisàkan'ny varahina ho an'ny vilia fitaratra.
Fanangonana vaovao (loha, fiara fitaterana, thermostat), thermostat, impeller, coils,
Mpandrindra, teboka, kitapo mpanodina (miaraka amina plastika plastika nanampy)
birao sy kapa mipetaka tampoka. Raha ny lalana dia nifidy rongony aho
bozaka vy ho an'ny loha solaitra. Tsy harafesina izy ireo, ka mora
mamoaka. Manantena aho fa tsy mila mamoaka azy ireo aho.
Nampiasa ny LocTite / Permatex Form-a-Gasket aho tamin'ny filokana sy teny amin'ny rano
Rehefa vita ny asa rehetra dia mihazakazaka tsara ny sambon-danitra, dia, tsy misy dikany, ary manomboka amin'ny voalohany,
Na dia tsy natao tany am-piandohana aza izany, dia nosoloina vaovao ary toa tahaka izao
nivoaka avy tao amin'ny efitrano fampisehoana. Ny fandaniana manontolo dia 400 $ ary ny asako manokana, fa
Ny fifaliana amin'ny fanaovana io famerenana io dia nanome ahy ny onitra feno ary
Ny # 28 dia maneho ny fomba fijerin'ny fiaramanidina alohan'ny sary.
Ny famoahana ny bozaka 8,5mm, #48, alohan'ny fanesorana amin'ny M10 hita ao amin'ny #49. Ny rantsa vita amin'ny kofehy no napetaka amin'ny ¼ "UNC filanjana, izay natao tamin'ny latabatra, hita maso ao amin'ny # 34.
Ny loha namboarina amin'ny fantsom-pitaona eo akaikiny amin'ny iray amin'ireo bolt bolt, #42. Kavitaly ary manangana eo amin'ny fivoahana amin'ny "Plastic Padding", #43.
Ny famadihana ny fanjaitra H / S dia hita ao amin'ny #45 sy #47.
Ao amin'ny sary #44 ny fanjaitra H / S vaovao, lava be, alohan'ny hamoahana ny fizarana, ny boribory ary ny kônina ho an'ny fametahana. Azo jerena koa ny fijery ny fanisiana varahina napetraka ao anaty vilia. Ny vatan'ny kôkà taloha dia tsara tarehy tsara ary tamin'ny voalohany dia rakotra lilia telo.
Raha nampiasa gazoline alkylat izahay fa tsy ara-dalàna, dia OK. Na izany aza taorian'ny vanim-potoana dia niova aho tamin'ny plastika'94 plastika, ka dia afaka mihazakazaka miaraka amin'ny solika mora kokoa.
Ny sary mifatotra dia mampiseho ny solontenako Johnson Seahorse 5.5 naverina naverina tamin'ny laoniny ary rehefa nitaingina ny sambon'ny sambo 14 izahay, midika hoe "Siljan" nataon'ilay "JOFA" avy amin'ny '70' voalohany. Nividy fiara tsy azo ampiasaina ho an'ny 400 $. Ho toy ny lozam-pifaliana, "JOFA" dia midika hoe "Johnsons Fabriker" (Orinasa). Na izany aza, tsy misy ifandraisany amin'ny OMC izy io, fa mety ho fantatra amin'ny fanaovana fiarovan-doha hockey sy fitaovana plastika sy fanatanjahan-tena hafa.
Araka ny hitanao dia mampiasa fiara fitaterana kely aho mba hiatrehana ilay baka. Ny loko dia efa nalaina tany am-piandohana (Audi 90 fotsy) avy amin'ny boban-drakitra eo amin'ilay mifangaro. Miafina amin'ny sarin'ny tany ny kofehy mainty eo amin'ny fiaramanidina saingy ampidirina amin'ny sary manaraka. Ao amin'ny fonosana môtô ihany, nesoriko ny rafitra fingotra efa-taona teo amin'ny takela-by teo amin'ny #27.
Hitako fa tsara kokoa ny vaovao. Amin'ny ankapobeny, ny namana sasany dia nilaza hoe - "... ity ivelany ity dia toa vaovao be" ...!
Ny Samoela, zafiafiko malaza (8) hita ao amin'ny #78 dia mahafinaritra be ny manao fitsangatsanganana kely tahaka ity, ary koa miaraka amin'i Hampus (5) rahalahiny.
Mipetraka eo amin'ny tetezianay kely aho #5 mijery ny bisy, "Mysingen". Ny birao, lehibe lehibe, 20x45 km, dia manomboka amin'ny nosy Ornö ary ampahany amin'ny Ranomasina Baltika (siramamy 0.7%). Ny Baltika dia misy lavitra kokoa, 1300x 400 km. Ny nosy dia ny nosy lehibe indrindra ao amin'ny vondronosy Stockholm, izay ahitana ny nosy lehibe 25.000!
Nandefa saripika maro aho, ary azonao ampiasaina izany araka izay tianao. Tena mahafinaritra ny manomboka ity fifandraisana aminao ity.
Indray mandeha indray, raha tsy misy ny lahatsoratra sy sary tsara mety nataoko dia tsy dia nanana fahafinaretana be loatra aho.
Miandrandra ny hihaino anao aho ary manantena anao ireo sary ...
Tohizo ny asa tsara.
Mbola mihazakazaka an-taonany maro ny tetikasa.
Jereo ny horonantsary Bo and his Boat & Motor
napetraky Fischer amin'ny Mon, 04 / 16 / 2019 - 21: 54
Joba tsara tarehy
Namerina tamin'ny laoniny ity singa ity ihany eto Wisconsin Etazonia. Ankafizo ny hafatrao sy ny sarinao. Misaotra ny fizarana.